Last nohavaozina: Jun. 14 2019 | 3 min namaky
Ny ankamaroan'ny olona eto amin'ity tontolo ity tsara fanahy, mahafinaritra be ny olona amin'ny fo toy izany ity lahatsoratra ity dia tsy mba dissing azy ireo. Izany dia momba ny 5% izay tsy latsaka ao ny sokajy. Na dia amin'izany 5% misy angamba tsara be dia be ny olona, Tsy olon-tiany fotsiny tsara ara-nofo, na mety tsy nahita ny olona mbola izay izy ireo lavo ny backwards hanao ny zava-drehetra ho an'ny. Ao amin'ity lahatsoratra ity aho handeha hosoratako tokony ho dimy fomba izany 5% mety hanimba ny fifandraisana.
Ny zavatra momba ny olona iray, raha mangalatra izy dia mihoatra noho ny azo inoana dia tsy hoe tia ny olona izy ireo amin'ny. Raha misy lehilahy dia ny fitiavana amin'ny olona iray fotsiny izy dia tsy mamitaka azy satria pales rehetra raha oharina. Izany no tsy mba hoe tsy hijery sy tsy afaka fa misy olona tsara tarehy. Mihevitra aho fa mety ho mandainga rehetra raha hoy rehefa teo amin'ny fifandraisana tsy nataontsika, fa ny fahasamihafana dia rehefa ianao amin'ny fitiavana tsy manao izany. Ary raha misy lehilahy mangalatra izany dia mampiseho fa tsy ny amin'ny fitiavana ny mpiara-miasa ary mamorona ny tsy fahampiam-pitokiana fa be dia be ny mpivady dia tsy afaka miverina avy any.
Asan'ny Apostoly Like A Jerk
Efa tsy mahalala fomba Tsy mangatsiaka fijery. Fa misy mihevitra ry zalahy izay mampalahelo izany. Misy aza mihevitra fa mangatsiatsiaka sy “Ahoana no misy olona hanao zavatra” sy izay rehetra fako. Tsy voatery ho mihazakazaka amin'ny voninkazo isaky ny dimy minitra, fa tsy maka be fotsiny mba ho tsara fanahy. Amin'ny fomba Azoko ny antony be dia be ry zalahy manao toy izany indraindray raha toa ka tsy misy jerk lalina. Be dia be ny olona manao toy ny rehetra ratsy zaza persona kanefa mihevitra aho fa misy ny fifandraisana vokany tsy hay misy fa te ratsy zaza amin'ny fo falifaly izay hitondra azy ireo tsara ary misy goavana fahasamihafana eo amin'ny ratsy zaza amin'ny fo falifaly sy ny olona iray izay tsy mahalala fomba ny anao sy mametraka anao eo amin'ny fotoana rehetra. Mihevitra aho fa indraindray mety ho hatsaram-panahy hita toy ny fahalemena, raha ny marina izany ny tanjaka sy ny ankamaroan'ny fifandraisana tsara indrindra dia izay samy olona mifampitondra tsara.
Hits ny Partner
Araka ity lahatsoratra ity dia mikasika ry zalahy manoratra ity aho momba ny lehilahy anisan'ny mikapoka ny mpiara-miasa, fa ity fizarana ity, toy ny fizarana rehetra ao aminy, Azo ampiharina amin'ny zavatra ny vehivavy no mba handrava ny fifandraisana izany loatra aho tsy mba nilaza fa ry zalahy ihany no nandona ny namany. Anisan'izany aho satria izany no zavatra ugliest olona iray dia afaka manao sy tena intsony ny fifandraisana tsy hivoatra, ary tena tokony hanakana azy. Aza tsy hisy na dia tena tianao izy ireo mba hiresaka anao manodidina raha toa ka ara-batana hampaninona anareo.
Asio olon-drehetra eo anatrehanao
Rehefa ao anatin'ny fotoana maharitra fifandraisana, ianao dia ekipa. Izy ireo dia tsy tokony ho mametraka ny fianakaviany, namana, rehetra eo anatrehanao ka nandray ny torohevitra ny fotoana rehetra ny anao. Amin'ny lafiny ianao tsy mety hataony ao anaty toe-javatra izay tsy maintsy misafidy fa raha tsy tonga ny zavatra toy ny reniny no tsy tia azy ianao ary tiany mba handrava aminao, raha tia anao izy ireo tokony ho anao sy ny Fifandraisanao aloha.
Fandaminana Fa Faharoa Best
Mihevitra aho fa fantatsika rehetra, raha ny anatra tsara isika loka. Mety efa-pitia amin'ny olona iray hafa dia nianjera tamin'ny alalan'ny na tsy mahatsapa toy izany koa ny momba azy ireo ka nonina ho anao ary izany no tsy tsara fototra ny fifandraisana. Mino aho fa isika rehetra mitady ny Fairytale, na inona na inona izay Fairytale dia midika ho antsika, ary be dia be ny olona fandaminana farany ny olona mba tsy ho irery izay ao mihitsy mora fanahy ny mahagaga nefa tsy tsara raha eo amin'ny lafiny iray ny olona iray mahatsapa toy ny fiainany amin'ny olona iray dia ny Fairytale rehefa eo amin'ny olona iray hafa mahita izany ho toy ny tsara indrindra izy ireo afaka nanao araka ny olona dia tia nandeha lasa sy ny toe-javatra toy izany any aoriana any foana mifarana amin'ny tsy fahasambarana.
Leslie ny Top Ten Dos sy Don'ts ny Summer Doggie Etiquette
Dia Online Dating Safidy Tsara ho Anao?